धोका प्रेम पत्र
ramkrishna January 10, 2021	धोका प्रेम पत्र
अल्पकालिन जिन्दगीको दीर्घकालिन सम्झना । अमिट माया अनि स्मृतिका यादहरु तिमीलाई ।खै.काब्या के भनेर सम्वोधन गरुँ म तिमीलाई ? पहिलो गल्ती तिमीलाई विश्वास गरें , दोस्रो गल्ती तिमीलाई मुटुभरि माया गरें । सम्झन्छु हिजोका ती सुमधुर पलहरु जहिलेसम्म तिमी मेरो साथमा थियौ वस त्यसै दिन देखि हरियाली वसन्त छाएको थियो मेरो जिन्दगीमा । जताततै आएको थियो, खुशीको बहार । पाखा पखेरामा रङ्गी–चङ्गी फूलेका थिए प्रीतीका फूलहरु । तिम्रो मिठो र न्यानो मायाको साथ पाएर मेरो जीवनको शितलताको अनुभूति गररहेको थिएँ तर अकस्मात शिशिर ऋतुले छोएर उजाड बनाईदिएको छ मेरो वसन्तमय जीवन अनि खुशी र उमङ्गको प्रिय संसारलाई ।
मुटुभरि पीडा र वेदना वोकेर गहभरि आँशु सजाएर गयौ । केही पल त बाँकी छ जीन्दगीका यी क्षणमा पनि आफूलाई माया गर्ने मान्छेको साथ पाउन सकिन । मेरो अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गएको छ । डुब्न लागेको घाम र निभ्न लागेको बत्तीको अवस्थामा पुगेको छु ।
त्यो तिम्रो सम्झनाको तेजीलो रापमा परेर म साह्रै नराम्रो संग जलिरहेको छु । तिमीलाई त सवथोक मानेको थिएँ तर विश्वाँसघात गर्यौ तिमीले मेरो भावना माथि । मेरो किस्मतमा तिम्रो माया यत्ति नै लेखेको रहेछ । समय र परिस्थितिले खेलाएको खेलमा नजानिदो तरिकाले म हार्न पुगेको छु ।
काब्या आशुको मूल्य तिमीलाई के थाहा तर पनि जे जति भएपनि तिमीलाई खासै मतलब त नहोला । यदि तिमी एक्लै नै जानु थियो भने मलाई किन दोबाटोमा लगेर अलपत्रमा पार्यौ ? यदि तिम्रो मनमा मेरो लागि स्थान थिएन भने मलाई किन झुटो आश्वासनमा अल्झायौ ? किन मिठा मिठा सपनाहरु देखायौ ? यदि विचैमा छोड्नु नै थियो भने दुई दिनको खुशी र विश्वास देखायौ किन ? तिमी त मेरो सवैथोक थियौ मेरो जिन्दगी हर खुशी अनि उमङ्ग ।
खोजेको थिएँ तिमीलाई मेरो आफ्नो बगैंचामा फुलाउन तर तिमी मलाई त्यो धोकेवाज तिम्रो प्रेम अनि स्वार्थीपनाले वितेका अतितका पलहरु स्मरण गर्दै निराश र उराठ लाग्दा दिनहरु विताउन विवश बनाएकी छ्यौ ।
तिम्रो जीवनमा फूल फूलोस र सवै काँडा ति मेरोमा होस् । भावनाको लहरमा बहकिएर मैले तिमीलाई प्रेमको फूलबारीमा अङ्गालो मार्ने प्रयत्न गरें तर तिमीले मलाई घृणा र तिरस्कारका शब्दहरुले तिखो बाण प्रहार गर्यौ र मिल्कायौ ।
तिम्रो घृणा र तिरस्कारको काँडा मेरो हृदयमा साह्रै नराम्रो संग विझिरहेको छ । पलपल दुःखी रहन्छ मुटु पनि । तिमीबाट यस्तो धोका पाउँला भनि म कल्पना गरेकोपनि थिईन तर आज त्यही भएको छ, जुन तिमीबाट त्यस्तो होला भनेर सपनामा पनि चिताएको थिईन । हो म हार्नु तिम्रो जीत हो । सम्झना पनि किन नहोस् संगै जीउने संगै मर्ने कसम खोई आज ?
ती हाम्रो भेट भएका सुन्दर पल एकान्त ठाउँका ती धेरै मीठा मीठा गफ सम्झन्छौ ? तर म सम्झिरहेको छु । तिमीले भुलेपनि म तिमीलाई भूल्न सकिरहेको छैन र भुल्दिन पनि । तिमीलाई सवै कुराहरु साटासाट गर्नु नै मेरो भूल ठहरिएको छ । दुःखमा संगै रुन्थें र खुशीमा संगै हाँस्थें । तिमी मेरो जिन्दगीबाट टाढा गएपनि म तिम्रो जिन्दगीबाट टाढा जान सकिन ।
काब्या तिमीसंग वितेका दिनहरुको यादमा डुबेर पीडादायी जीवन विताउन बाध्य भएको छु । तिमी सधै खुशी रहनु । मबाट नपाएको मायाँ अरु कसैवाट पाउनु । तिम्रो जीवन सधैं सफल बनोस र गन्तब्य स्थानसम्म पुग्न सफल रहोस । यो जुनीमा त यस्तै भयो अर्को जुनीमा म तिम्रो, तिमी मेरो भएर जन्म लिनेछु । तिम्रो खुशी जीवनको शुभकामना ।
-उही तिम्रो भलो चिताउने मान्छे
Previous Previous post: अमेरिका र नेपालका मनिसहरुको सोच ठिक उल्टो
Next Next post: धोका स्टेटस नेपाली | Dhoka status Nepali